chandra saud(chandra saud) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले नेप्से प्रमुखमा चन्द्र साउदको नियुक्ति खारेजीका लागि मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि बुधबार अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले हाजिर हुन साउदलाई रोकेपछि उत्पन्न विवाद यथावत छ । न्यौपानेले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्रालयबाट चिठी नपठाई साउदलाई...
नेप्से प्रमुख साउद भन्छन्–‘आज अध्यक्षको मान राखिदिएँ, भोलिदेखि अफिस जान्छु’
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई बुधबार अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले हाजिर गर्न नदिएको बिषय चर्चामा रह्यो । नेप्सेका अध्यक्ष न्यौपानेले बुधबार अफिस नआउनु भनेपछि साउद लामो समयसम्म घरमै बसे । तर, सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली भई जिम्मेवारीमा फर्किएका उनको मन मानेन् र दिउँसो अफिस पुगे । अफिस...
नेप्से अध्यक्षले भने–‘अर्थले चिठी नलेखी साउदलाई हाजिर हुन दिँन्न’
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षण सुरु भएको दोश्रो दिन नेप्सेको उच्च तहमा लफडा भएको छ । सरकारले गरेको नियुक्ति खारेजीविरुद्ध अदालत गएर न्याय पाई पुनर्बहाली भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र साउदलाई संचालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेले हाजिर हुन नदिएपछि लफडा भएको हो । सर्वोच्चले साउदको पक्षमा...
BREAKING : नेप्से प्रमुख साउदलाई काममा फर्काउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई काममा फर्काउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारले आफूलाई गैरकानूनी ढंगले पदमुक्त गराएको भन्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयनविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै साउदले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै...
नेप्से प्रमुख साउद सर्वोच्चमा, झा र मिश्रलाई न्याय
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद सरकारले आफूलाई गैरकानूनी ढंगले पदमुक्त गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा आफूहरुको नियुक्ति राजनीतिक नभएको उल्लेख गर्दै अन्याय भएको व्यहोरासहित रिट दायर गरेका हुन् । उनले दायर गरेको रिटमा नेप्से प्रमुखको नियुक्ति वा...
अन्ततः अर्थले पठायो नेप्से प्रमुखको पद खारेजीको पत्र, अनलाइन कारोबारको मिति सर्नसक्ने !
काठमाण्डौ । अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णयलाई आधार बनाउँदै नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदको पद खारेजीमा परेको पत्र पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले आइतबार नेप्सेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति खारेजीमा परेको पत्र पठाएको हो । अर्थमन्त्रालयले पत्र पठाए पनि आइतबार साउदले...
‘अनलाइन कारोबार प्रणालीको पूर्ण परीक्षण साउन १ देखि नै !’
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको पूर्ण परीक्षण साउन १ गतेदेखि गर्ने भएको छ । नेप्सेले अनलाइन कारोबार प्रणालीको बिषयमा लगानीकर्तामा अन्यौल बढेपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समयतालिका समेत सार्वजनिक गरेको हो । नेप्सेले पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि नै नयाँ अनलाइन...
अनलाइन प्रणालीको टेस्टिङका लागि ५ ब्रोकर छनौट, साउन १ देखि नै कार्यान्वयनमा !
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको टेस्टिङ बिहीबारदेखि ५ वटा ब्रोकरमार्फत हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्व निर्धारित टाइमलाइनअनुसार स्टक ब्रोकर एशोसिएसनलाई अनलाइन कारोबार प्रणालीको टेस्टिङका लागि ५ ब्रोकरको नाम सिफारिस गर्न पत्र पठाएको थियो । नेप्सेलाई एशोसिएसनले बुधबार पत्र पठाउँदै ५ वटा...
महालक्ष्मी बैंकका २ शाखाको एकैदिन उद्घाटन
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी बिकास बैंकले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्ने क्रममा जेठ ३० गते बुधबार दार्चुलाको गोकुलेश्वर शाखा र बैतडी जिल्लाको पाटन शाखाको एकैसाथ औपचारिक समुद्घाटन गरेको छ । बैंकको गोकुलेश्वर शाखाको समुद्घाटन शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर अमरसिंह धामीले तथा पाटन शाखाको समुद्घाटन पाटन नगरपालिकाका मेयर केशबबहादुर चन्दले गरेका...
जेठभित्र भेण्डर कम्पनीले सिस्टम हस्तान्तरण गर्ने, साउनअघि अनलाइन कारोबार प्रणाली आउने संभावना न्यून
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको विकास गरिरहेको भेण्डर कम्पनी वाइको प्रालिले अधिकांश काम सकेको छ । कम्पनीले अधिकांश काम सकी नेप्सेलाई डेमो उपलब्ध गराएको छ र सोही आधारमा नेप्सेको आइटी विभागले आन्तरिक टेस्टिङको काम गरिरहेको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बताएका छन् । ‘यद्यपि...
नेप्से प्रमुख भन्छन्-'अनलाइन प्रणालीको काम सकिएको होइन, ब्रोकरलाई फिडब्याकका लागि बोलाइएको हो'
काठमाण्डौ । बिहीबार बजार बुम हुनेमध्येको एउटा कारण थियो: नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमीटेडले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको डेमोको लागि ब्रोकरहरुलाई बोलाएको र यो प्रणाली निर्माणको काम लगभग सकिएको भन्ने खबर । तर, के अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माणको सबै काम सकिएर ब्रोकरहरुलाई डेमोका लागि बोलाइएकै हो त ? नेप्सेका प्रमुख...
‘नयाँ आ.ब.को सुरुवातमै पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली’
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको सुरुवात तोकिएकै समयमा हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले अनलाइन प्रणाली निर्माणको काम द्रूत गतिमा भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै त्यसको लञ्च हुने प्रष्ट पारेका हुन् । बिजशालासँग कुरा गर्दै...
‘सेयर कारोबारमा भ्याट लाग्नुहुँदैन, नयाँ आ.ब.देखि जसरी पनि अनलाइन प्रणाली ल्याउँछौ’
►चन्द्रसिंह साउद(सीइओ)-नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) नेप्से प्रमुखको रुपमा २ महिनाको अवधि कत्तिको सुखद रह्यो ? अफिस मात्रै फरक हो, यस्तो जिम्मेवारी पहिला पनि पूरा गरिसकेको छु । खासै केही फरक छैन । जुन पुरानो संस्थामा थिएँ, त्यसको दायरा सानो थियो, यसको दायरा ठूलो छ, फरक यत्ति मात्र हो । जिम्मेवारी केही बढेको अनुुभव मात्रै भएको छ, खासै धेरै फरक...
नेप्से प्रमुखले भने–‘अनलाइन कारोबार प्रणाली चाँडै’
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवात आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार बधाई दिन उनकै कार्यकक्षमा पुुगेका सेयर लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरुसँग नेप्से प्रमुख साउदले अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुरुवातलाई आफूले पहिलो प�...